China AY Series mpamokatra solika afovoany sy mpamokatra | KAIQUAN
Ny paompy sentrifugal AY dia noforonina sy nohavaozina mifototra amin'ny paompy Y izay taloha. Ity dia karazana vokatra vaovao mifanaraka amin'ny fangatahana fananganana maoderina. Manana fahombiazana avo kokoa izy io ary paompy fitehirizana angovo io.
Ny paompy sentrifugal AY dia noforonina sy nohavaozina mifototra amin'ny paompy Y izay taloha. Karazana vaovao io ny vokatra hihaona amin'ny fangatahana fananganana maoderina. Manana fahombiazana avo kokoa izy io ary paompy fitehirizana angovo io. Raha toa ka tsy misy fiatraikany amin'ny fifanakalozan'ny vokatra dia manatsara izahay singa tsy mitombina sasany hanatsarana azy io.
1. Ho an'ny vatana mitondra, dia soloinay 35,50,60 vatana misy paompy Y izay taloha miaraka amina 45.55,70 vatana izay azo ianteherana avo.
2. Mampiasà maodely hydraulic haingam-pandeha ho an'ireo faritra mivezivezy sy ny maodely ankehitriny 5 ~ 8% fahombiazana avo kokoa noho ny maodely taloha.
3. karazana karazana paompy menaka karazana AY, refy fametrahana, fandrakofana fampisehoana, kilasy materialy tsy miova. Mety ny manavao paompy taloha.
4. Ireo singa mahazatra mahazatra dia ampiasaina amin'ny vokatra maromaro.
5. Ampiasaina tsara ny fitaovana. Ary ny akamaroany indrindra class ~ ~ 3. Mampitombo karazany roa izahay fitaovana, vy vy ary atsipazo vy, ho an'ny singa toy ny mitondra vatana ka ny paompy dia ho mety kokoa amin'ny faritra mangatsiaka na amin'ny toetry ny asa toy ny eny ivelany, an-dranomasina sy ny sisa.
6. Misy karazany telo ny endrika fitondra mangatsiaka, ny rivotra mangatsiaka mangatsiaka, ny fampangatsiahana rivotra ary ny rano mangatsiaka. Ny hafanan'ny asa dia tsy mitovy arakaraka ny toe-javatra iasana. Ilay mpankafy an'habakabaka endrika mampangatsiatsiaka indrindra no mety amin'ny faritra izay tsy fisian'ny rano madio.
7. karazana paompy AY dia manana kalitao tsara kokoa aorian'ny fanavaozana sy fanatsarana singa sasany arakaraka hevitry ny mpanjifa.
Misy paompy solika AY 27 karazana ary ny fandrakofana fampisehoana:
Fahafahana: Q = 2.5-600m3 / h
Loha: H = 20-670m
Toetran'ny asa: t = -45 ~ = 420 (paompy marobe -20 ~ = 200)
Sahan'asa (t): -20 ~ + 420
Ny paompy andian-tsarimihetsika AY dia ampiasaina amin'ny fanadiovana solika, indostrian'ny petrochemical, indostria simika ary hafa fampiharana hanaterana solika tsy misy sombiny matanjaka, LQG ary fitaovana hafa. Mety kokoa io mba hanaterana ranon-hafanana avo lenta mirehitra, mety hipoaka na misy poizina.
Teo aloha: Paompy Sodina KGD / KGDS Series mitsangana
Manaraka: Paompy sentra isan-karazany KD / KTD Series
Paompim-pandrefesana indroa miserana avo roa heny
Paompy tsy misy fangarony Stainless Steel
Paompy maripana marolafy multistage mitsangana
Paompy afovoan-tany maro
Paompy sentra isan-karazany KD / KTD Series
Paompy Sodina KGD / KGDS Series mitsangana
Paompy fanodinana indostrialy simika KCZ Series
KQA Series Multistage Pump miaraka amina casing axial